လယ်ကွက်ရေးမြောင်းထဲတွင် လူတစ်ဦးအား ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်ထား – MEDIALANN
All About Online Local News
လယ်ကွက်ရေးမြောင်းထဲတွင် လူတစ်ဦးအား ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်ထား
တောင်ငူမြို့ မြောက်ဘက် ဧက ၅၀၀ စံပြစိုက်ခင်းလယ်ကွက်ရေးမြောင်းထဲတွင် လူတစ်ဦးအား ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်ထား
တောင်ငူ မေ ၈
တောင်ငူမြို့နယ် မဟင်ကျေးရွာအုပ်စု I နှစ်ဆောင်ပြိုင်ရွာ တောင်ဘက် ဧက ၅၀၀ စိုက်ခင်း လယ်ကွက် ရေမြောင်းအတွင်း လူတစ်ဦးဓားဒဏ်ရာများဖြင့်သေဆုးံနေကြောင်းသိရသည်။
တောင်ငူမြိုနယ် ရန်ကုန် – မန္တလေး လမ်းဟောင်း မိုင်တိုင် ၁၆၃ / ၂ / ၃ အကြား မဟင်ကျေးရွာအုပ်စု I နှစ်ဆောင်ပြိုင်ကျေးရွာ၏ တောင်ဘက် ( ၁) မိုင်ခွဲ ခန့်အကွာ ဧက ( ၅၀၀) စံပြလယ်ကွက်အတွင်းရှိ လယ်ရေမြောင်းအတွင်းတွင် မေလ ၈ ရက် နံနက် ၁၂ နာရီ ၁၅ မီးနစ်အချိန်တွင် ဦးဝင်းမြင့် (၄၂) နှစ် I (ဘ) ဦးဘိုကြီး တောင်ငူမြို့နယ် နေပူကုန်းနေသူသည် ရင်ဘတ်အတွင်း ထိုးသွင်းဒဏ်ရာ I (၁၄) ချက် I ကျောတွင် ထိုးသွင်းဒဏ်ရာ (၄)ချက် I မျက်နှာပြတ်ချဒဏ်ရာ (၂)ချက်နှင့် လည်ပင်းတွင် ပြတ်ချ ဒဏ်ရာ (၁) ချက် I ပါးစပ်တွင် ငယ်ပါ လှီးဖြတ်ကာ ထည့်ထားလျှက် ပက်လက်အနေအထားဖြင့် သေဆုးံနေကြောင်း ရဲမှတ်တမ်းများအရသိရသည်။
အဆိုပါဖြစ်စဉ်နှင့် ပက်သက်၍ သေဆုးံသူ ဦးဝင်းမြင့် ၏ ညီမဖြစ်သူ မဥမ္မာ (ဘ) ဦးဘိုကြီး နေပူကုန်းကျေးရွာ နေသူမှ တရားလိုလုပ် တိုင်တန်းလာသဖြင့် တောင်ငူမြို့နယ် ကျွန်းကုန်း နယ်မြေ ရဲစခန်းတွင် (ပ)၁၇၂ /၂၀၁၉ အမှုကြီးအမှတ် ၁/ ၂၀၁၉ ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ ၃၀၂ ဖြင့် အမှုဖွင့် စစ်လျှက်ရှိပြီး တရားခံ ဖမ်းမိရေးအတွက် စုံစမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း ကျွန်းကုန်း နယ်မြေ ရဲစခန်းမှ သိရပါတယ်။
နေလင်းအောင် ( တောင်ငူ )
တောငျငူမွို့ မွောကျဘကျ ဧက ၅၀၀ စံပွစိုကျခငျးလယျကှကျရေးမွောငျးထဲတှငျ လူတဈဦးအား ရကျရကျစကျစကျ သတျဖွတျထား
တောငျငူ မေ ၈
တောငျငူမွို့နယျ မဟငျကြေးရှာအုပျစု I နှဈဆောငျပွိုငျရှာ တောငျဘကျ ဧက ၅၀၀ စိုကျခငျး လယျကှကျ ရမွေောငျးအတှငျး လူတဈဦးဓားဒဏျရာမြားဖွငျ့သဆေုးံနကွေောငျးသိရသညျ။
တောငျငူမွိုနယျ ရနျကုနျ – မန်တလေး လမျးဟောငျး မိုငျတိုငျ ၁၆၃ / ၂ / ၃ အကွား မဟငျကြေးရှာအုပျစု I နှဈဆောငျပွိုငျကြေးရှာ၏ တောငျဘကျ ( ၁) မိုငျခှဲ ခနျ့အကှာ ဧက ( ၅၀၀) စံပွလယျကှကျအတှငျးရှိ လယျရမွေောငျးအတှငျးတှငျ မလေ ၈ ရကျ နံနကျ ၁၂ နာရီ ၁၅ မီးနဈအခြိနျတှငျ ဦးဝငျးမွငျ့ (၄၂) နှဈ I (ဘ) ဦးဘိုကွီး တောငျငူမွို့နယျ နပေူကုနျးနသေူသညျ ရငျဘတျအတှငျး ထိုးသှငျးဒဏျရာ I (၁၄) ခကျြ I ကြောတှငျ ထိုးသှငျးဒဏျရာ (၄)ခကျြ I မကျြနှာပွတျခဒြဏျရာ (၂)ခကျြနှငျ့ လညျပငျးတှငျ ပွတျခြ ဒဏျရာ (၁) ခကျြ I ပါးစပျတှငျ ငယျပါ လှီးဖွတျကာ ထညျ့ထားလြှကျ ပကျလကျအနအေထားဖွငျ့ သဆေုးံနကွေောငျး ရဲမှတျတမျးမြားအရသိရသညျ။
အဆိုပါဖွဈစဉျနှငျ့ ပကျသကျ၍ သဆေုးံသူ ဦးဝငျးမွငျ့ ၏ ညီမဖွဈသူ မဥမ်မာ (ဘ) ဦးဘိုကွီး နပေူကုနျးကြေးရှာ နသေူမှ တရားလိုလုပျ တိုငျတနျးလာသဖွငျ့ တောငျငူမွို့နယျ ကြှနျးကုနျး နယျမွေ ရဲစခနျးတှငျ (ပ)၁၇၂ /၂၀၁၉ အမှုကွီးအမှတျ ၁/ ၂၀၁၉ ရာဇသတျကွီး ပုဒျမ ၃၀၂ ဖွငျ့ အမှုဖှငျ့ စဈလြှကျရှိပွီး တရားခံ ဖမျးမိရေးအတှကျ စုံစမျးဆောငျရှကျလကျြရှိကွောငျး ကြှနျးကုနျး နယျမွေ ရဲစခနျးမှ သိရပါတယျ။
နလေငျးအောငျ ( တောငျငူ )
ပျောက်သွားသည့် ကျောက်ပန်းတောင်းသူ မိန်းကလေးကို ပြန်တွေ့ပါပြီ
အသက် (၄)နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးငယ်အား အသက်(၁၁)နှစ်ကျော် ယောက်ျားလေးမှ အဓမ္မပြုကျင့်
ကန်ဒေါ်လာ ၁.၆ ဘီလီယံ ဆိုတာ မြန်မာပြည်မှာ အချမ်းသာဆုံးဆိုတဲ့ တေဇထက်တောင် ကန်ဒေါ်လာ သန်း ၄၀၀ ပိုသေးတယ်
၁၂ နှစ်အရွယ် စွံ့အနားမကြားသော သမီးအပါအဝင် သမီးအရင်း ၂ ဦးအား အဓမ္မပြုကျင့်သည့် ဖခင်
စည်ပင်ဧည့်ရိပ်သာတွင် ရွှေခိုးမှု တရားခံမိပြီ
အောင်ကြီး တရားခံ(လုံးဝ)မဟုတ်နိုင်တော့ပါဟု ယူဆရသော cctv ဖိုင် ထွက်ပေါ်
အမျိုးသမီးသုံးဦး ဘုန်းကြီးပိုက်ဆံ ၂၁ သိန်း ခိုးယူ
ကိုကို ညီညီ ရဲ့ မိခင် ဒေါ်ဥမ္မာလှိုင်ကိုယ်တိုင်ရှင်းပြီ (ဗီဒီယို)
(၈၃) နှစ်အရွယ်အဖွားအိုတစ်ဦး သားမယားအဖြစ်ပြုကျင့်ခံရ
အောင်ကြီး မဟုတ်နိုင်ကြောင်း ကျောင်းအုပ် ဦးပညာ ရှင်းပြီ
Wisdom Hill အမှု အဓိကသက်သေ ဆရာမနှင်းနု ပျောက်ဆုံးနေ
Medialann is your news, entertainment, music fashion website. We provide you with the latest breaking news and videos straight from the entertainment industry.
Copyright © 2019 Medialann. All Rights Reserved.